मुखमा लगाउनै नहुने १० कुराहरू यसप्रकार छन : डा. प्रकाश आचार्य – News Nepali Dainik
मुखमा लगाउनै नहुने १० कुराहरू यसप्रकार छन : डा. प्रकाश आचार्य
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०२, २०७७ समय: २२:१३:४४
प्राय जसो गर्मी महिनामा धेरै पसिना बउने मानसिहरूकले अनुहारम डेओडेरेन्ट लगाउने गरेको देखिन्छ । मेकअप सेभ गर्न हेअर स्प्रेको प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता वस्तुहरुमा अनुहारलाई हानी गर्ने धेरै रसायनहरू हुने गर्दछ।
नेपाली बजारमा पाइने भ्यासलिन पेट्रोलियम जेल्लीको उदाहरण हो । यो अनुहारमा लगाउन उपयुक्त हुन्न । यसले अनुहारमा भएका तेल/पसिना ग्रन्थीहरूलाई ब्लक गरी दिन्छ । विशेष गरी डण्डीफोर भएकाहरुले झन् लगाउनु हुँदैन।
Last Updated on: February 14th, 2021 at 10:13 pm
१०८४ पटक हेरिएको